भारतका समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वारले जयप्रदाको ‘अण्डरवेयर’ को रङमाथि गरे टिप्पणी जयप्रदाले भनिन् के तिम्रो घरमा आमा वा छोरी–बुहारी छैनन् ? « Light Nepal
भारतका समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वारले जयप्रदाको ‘अण्डरवेयर’ को रङमाथि गरे टिप्पणी जयप्रदाले भनिन् के तिम्रो घरमा आमा वा छोरी–बुहारी छैनन् ?
Published On : 15 April, 2019 2:24 pm
एजेन्सी । भारतको समाजवादी पार्टीका दिग्गज एवं रामपुरका उम्मेद्वार आजम खानले आफ्नो प्रत्याशी बिजेपीका उम्मेदवार जया प्रदाको विषयमा व्यक्तिगत टिप्पणी गरे पछि उनी विवादित बनेका छन् । भारतीय जनता पार्टी )बिजेपी) नेता जया प्रदाको विषयमा उनले गरेको टिप्पणीको सबैतिर आलोचना भएको छ । उनका विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणीमाथि मुद्दा दर्ता भएको छ । आजमको बयानमा संज्ञान लिँदै क्षेत्रीय मजिस्ट्रेटले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
उनले जया प्रदालाई निशाना बनाउँदै भनेका थिए, ‘जसलाई मैले औंला समातेर रामपुर ल्याएँ, तपाईंहरुले १० वर्ष जसमार्फत् प्रतिनिधित्व गराउनुभयो।।।। उनको वास्तविकता बुझ्न तपाईंलाई १७ वर्ष लाग्यो, मैले १७ दिनमा थाहा पाएँ कि उनको ‘अण्डरवेयर’ खाकी रंगको छ ।’
आजमको यस्तो टिप्पणीपछि जया प्रदाले पनि टिप्पणी गरेकी छन् । उनले भनेकी छिन्, ‘आजम खानले जुन शब्द मेरा लागि प्रयोग गरेका छन् त्यो म आफैं भन्न सक्दिनँ न नै भन्न चाहन्छु । यी व्यक्ति सुध्रने किसिमका छैनन् । यसपटक त उनले हद नै पार गरेका छन् ।’
महिलाको विषयमा यस्तो टिप्पणी गर्ने आजम खानलाई जया प्रदाले सोधेकी छिन्, ‘के उनको घरमा आमा वा छोरी–बुहारी छैनन् ? के आजमले आफ्ना घरका महिलाका लागि पनि उनले यस्तै भाषा प्रयोग गर्छन ? ’ यस्तो भन्दै जया प्रदाले आजम खानसँग आफ्नो सबै सम्बन्ध समाप्त भएको घोषणासमेत गरिन् ।
जया प्रदाले आजमको बयानमा प्रतिक्रिया दिँदै भनिन्, ‘के म मरुँ, मैले यति गर्दा तपाईंलाई आनन्द हुन्छ ? ’जया प्रदाले आफू यस्तो टिप्पणीले नडाराउने भन्दै आफू रामपुरबाट नजाने स्पष्टिकरण दिइन् । उनले आजम खानलाई चेतावनी दिँदै भनिन्, ‘आजम खान तिमीलाई म जसरी पनि हराउनेछु र देखाउनेछु कि जया प्रदा को हुन् ।’